July | 2015 | Our Fire-Place
Murangarire kuti vaChibhaghidhi havadye Hanyanisi- Snippet of My Life 17
Ndakanga ndiri muroora mutsva, ndiri busy kukanga nyama, uye kushenaira kubikira mhuri pamusha. Huku yakanga yatsvukirira mupoto, madomasi netuhanyanisi tweku-garden kwaMujeri ndachekerera mumbiya ndamirira kuti ndikande mupoto.
Amwene vangu, vakabva vandiranangaridza, “maiguru, aChibhaghidhi havadye hanyanisi. Zviri pavari hazvidi onion”.
VaChibhaghidhi yaive shamwari yava mwene vangu yepamoyo uye vari vavakadzini. Ndakabvumira kuti ndazvinzwa, asi ndisina kunyatso bata mazwi. Ndakaenderera mberi nekubika, ndokukanda hanyanisi netumvura muto ndokutsvukirira. Munyu ndakaisa waienderana, uye ndikafara nekubika kwandakanga ndaita.
Vamwene vangu vakadaidza sahwira wavo apo ndakanga ndave kupakura sadza. Ndipo pandakachechuka kuti, hezvo, ndakanganwa kubvisa kambiya parutivi kavaChibhaghidhi. Ndaka kumbira ruregero ndikati zvisineyi paive nekamudzonga kebeef, saka ndaikwanisa kungo gocha kuti vawane chekusevesa.
Vamwene vangu nasawhira vavo vese vaive vapera mazino achingova mavende. Saka nyama yekungocha yakanga iri dambudziko. Ndakatobika kapoto kamwe kenyama, apa ndaneta, muviri wese rangove dikita nemoto wekumusha. Kungoti huni hadzinetsi kuminda mirefu, pasina nguva ndakanga ndakakanda domasi, kange kange netusauti. Zvakabva zvaita.
Takazodya zvedu sadza vamwe vese vatopedza kare. Raive gore redzidzo semuroora mutsva.